Mhlawumbe, cishe ngamunye ebuntwaneni abakhulukazi bethu abathandekayo babelungiselela amakhukhi amnandi namahle kakhulu amancane - ama-bagels we-puff pastry ne-cherry noma i-apple jam. Ukugxila kulokhu okudliwayo kungathathwa noma yikuphi: kungabeliswa ubisi, izithelo ezintsha, i-cottage shizi, i-jam kanye ne-chocolate. Uma usuvele usebenzisa i-puff pastry eyenziwe ngomumo, khona-ke ungakwazi ukupheka lokhu kudla okulula futhi okusheshayo.
Ikhekhe elimnandi elivela emanzini okugcoba liyisiphuzo esihle kakhulu kubangani nezivakashi, ngeke lishiye noma ubani ongathandanga, futhi ikakhulukazi uyojabulisa izingane.
Ukuze silungiselele sidinga:
- isikhonkwane (mhlawumbe imbiliso) - 250 amagremu;
- inani elincane lofulawa (cishe amapuni amabili);
- amathisipuni ayisithupha ushukela nge-slide;
- jam noma amajikijolo ukugcwalisa.
I-puff pastry isengaphambili. Etafuleni lapho sizoyiqeda khona, uthele inani elincane lofulawa. Ngakho inhlama ngeke ibambe futhi iphule, kuyoba lula kakhulu ukuyibeka ngendlela efanele. I-puff pastry eyenziwe ngomumo ephaketheni idayiswa kumashidi, futhi ukuze kuphuthelwe i-bagels, kuyadingeka umbuthano, ngakho-ke amashidi adinga ukuba ahlolwe abe yinye inhla, bese efakwa embuthanweni omkhulu. Ungayigxilili kakhulu, kungenjalo kuyohlala ichitheka. Ubukhulu kufanele bube ngamamithamitha amathathu kuya kwangu-4.
Ngaphezu kwalokho, umbuthano ogoqwe kufanele uhlukaniswe ngezigaba. Sika kusukela phakathi kuya emaphethelweni. Ingqimba engaphandle kufanele ibe yiyona enkulu kunazo zonke, inani lemikhakha lithembele ukuthi ubukhulu bombuthano obunakho. Ukushiya cishe u-centimeter ukusuka emaphethelweni amakhulu, sisakaza ukugcwaliswa. Uma ukhetha izithelo ezintsha, phawula ukuthi akufanele kube khona okuningi ketshezi ekugcwaliseni, ngaphandle kwalokho kuzosakazeka futhi kungashisa ekubhaka, futhi kuzonakalisa i-bagels yakho kusuka emgqonyeni we-puff.
Isinyathelo esilandelayo: izintantathu zethu nokugcwaliswa kufanele zihlanganiswe esiqondeni esivela emaphethelweni amakhulu kuya komncanyana. I-ovini ngalesi sikhathi kufanele ifuthe ku-degrees angu-180. I-tray yokubhaka ishisa kancane futhi igcoke ngokucophelela ngebhotela noma ihlanganiswe ne-foil yokubhaka. Ukwenza amabhasi ethu avele emnandi futhi abe nombala omuhle wegolide, adinga ukuba asongwe phezulu. Ukuze wenze lokhu, iqanda elilodwa liphukile zibe ipuleti elilodwa, futhi ushukela lithelelwa kwelinye. I-bagel ngayinye ifakwe kuqala epulangwe ngeqanda elishaywe, bese ushukela.
Ama-bagels abekwe ebhodini lokubhaka. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi abathintana futhi bangashisi. Emva kwalokho, uwabeke ehhavini bese ubhake cishe imizuzu eyishumi neshumi kuya kwemibili. Kodwa okokuqala, isikhathi sokupheka sincike kwizici ze-ovini yakho. Qaphela lapho ama-bagels eqala ukugqamile, - kusho ukuthi yisikhathi sokubathola.
Ngakho ngokushesha nangokumane, ngokoqobo ngaphakathi kwengxenye yehora, izingxowa zakho ezivela ku-puff pastry zizolungele. Ngaphambi kokukhonza, kungcono ukuzipholisa. Uma unezithelo ezigcwele acilic, ungafafaza ushukela powder phezulu. Kungcono ukukhonza itiye noma ikhofi.
Burfi: iresiphi kusuka ebisi powder. Amaswidi aseNdiya
Dynasty Durov. isekisi abaculi
Ephakathi cafe "Gothic" ngesikhathi kwase-Angarsk